JOSM - CAD-yada si ay xogta uga helaan OpenStreetMap - Geofumadas
Luulyo, 2015 Cartografia, aragti ugu horeysay
OpenStreetMap (OSM) ayaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah tusaalooyinka weyn ee ku saabsan sida macluumaadka loo bixiyay hab wadashaqeyn ay u dhisi karaan nooc cusub oo ah macluumaadka kartoonka. Sidan oo kale Wikipedia, arintaas ayaa noqotay mid aad u muhiim ah in maanta joqraafiyada laga doorbido in lakala dhigo lakabka asalka ah ee ka walaacsan in la cusbooneysiiyo macluumaadkaaga ku saabsan dhinacyada sida xiisaha, ganacsiga ama macluumaadka aan macquul ahayn in la sii wado.
Mashruuca qeyb galaya koobka Isticmaalka Cadastral tegi kartaa oo ku saabsan ganacsigaaga, sirqoollada, iyo takhasuska cartography maxaliga ah, daynin tixraaca xogta yihiin dadka lala simay, haddii ay suuragal tahay kor iskaashi, inay ogaadaan in xitaa haddii aan la updated degaanka, maalin maalmaha doontaan, maxaa yeelay, waa laga bogsoon.
Waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo lagu beddeli karo macluumaadka OpenStreetMap. Iyadoo ku xiran waxa shaqeynaya, ikhtiyaarka ah in laga sameeyo internetka ama laga soo guuriyo mobile waa mid sahlan dhibcooyinka wadooyinka ee lagu sameeyay sawir-qaadid aan sawir lahayn. Laakiin haddii aanu rajaynayno inaanu samayno khudbado adag, oo leh khariidado ku yaal DXF, qaababka GPX ama in aan nahay CAD jecel yahay, xalka xiisaha leh waa JOSM, qalab macmiil ah oo lagu sameeyay Java.
Tani waa tusaalayaal, taas oo lakala daayo OSM. Waan arki karaa sababtoo ah sawirka Google waa ka dambeeyey waxa OSM muujin karo, badanaa Bing, taas oo dalal badan oo soo ifbaxaya aad u liita.
Khariidaddu waxay muujinaysaa waxa aaggu ahaa sida laba sano ka hor.
Sawirku wuxuu muujinayaa sida ay ahayd ka dib markii korontada la dhisay sannadkii hore.
Barnaamijka JOSM waa mid sahlan in la isticmaalo qofkii isticmaalay barnaamij sida AutoCAD ama Microstation. In lagu dhiso Java waa multiplatform oo hal mar la soo dejiyey waxay diyaar u tahay oo kaliya inay shaqeyso. Sida aad u arki karto, sawirkaan ee Bing waa in qof mar la cusbooneysiiyo khariidadaha.
Riix badhanka badhanka, nidaamka wuxuu hoos u dhigayaa meesha xiisaha leh ee qaabka vector, si loo saxo, tirtiro ama lagu daro.
Xaaladdan oo kale, waxaan doonayaa in aan u cusboonaysiiso farqiga buundada. Guddi Kooxda kuu ogolaanayaa inaad doorato layers aad rabto in aad soo bandhigaan, la xaddidaadda ah in aan la raran karo Google Images siyaasadaha asalka qeyb galaya si looga fogaado khilaaf xuquuqda, laakiin sidoo kale sababta oo ah kitaabkii duudduubnaa sita images keeni lahaa khilaafka adag si ay u ilaaliyaan .
Mid ka mid ah doorasho waa in lagu wado buundada, iyadoo gps mobile activated ka dibna soo rogo macluumaadka. JOSM waxay taageertaa xogta furfuran ee sawirrada jajaban, DXF, qaababka la helay GPS sida GPX, NMEA, iyo sidoo kale inay ku jiraan adeegga WMS, iyo kuwo kale.
Si aad u beddesho ama u cusbooneysiiso waa inaad leedahay user, kaas oo qaadata dhowr daqiiqo bogga OpenStreetMap.
Qeybta dhinaca ah waxay muujineysaa lakabyada asalka ah, soo jeedi, xirid.
Si aad u dooran taas oo aanu ka filan si ay u arkaan in guddi la doorto this ka taswiirta ku menu top - oo halkan laga heli karaa Bing, MapBox Satellite, Mapquest Open Anteenada, wms wadooyinka gaar ah ama sidoo kale warpeadas images la shaqeynayaan in barnaamijka keenaa.
Waxaad kaloo dooran kartaa qaabka aan rajeyneyno inaan aragno walxaha vector.
Heerka waxqabadka, waa inaad bartaa qaar ka mid ah kumbiyuutarrada kumbuyuutarrada ama isbarbar-dhejiska maadama sababtoo ah badhanka yaryar ayaa xaddidan. Calaamada + waa calaamad u dhiganta, calaamad ujeedka fog, sida ugu badan ee aan rabay, ma aanan helin badhan si aan u leexiyo (god).
Markaad taabato shay, fursadaha xuduudaha ah ayaa la hawlgeliyaa, sida badalida jihada wadada, sii wadida ama ku dhejinta noodhka.
Waa inaad la ciyaartaa raashinka si aad u aragto farsamooyinka jira, iyo sidoo kale aragti kala duwan ee plugins si aad u doorato waxa xiisaha u ah in la soo dejiyo.
Si aad uhesho xariiqyo isbeddelaya, waxaan haystay oo kaliya inaan u wareego noodhadhka, iyadoo la taabto xarunta qaybta cusub ee noodbeeska ayaa la abuuraa iyada oo aan wax dhib ah. Si aad u hagaajiso noodbeerka laba xariiq oo ku xiran, waxaan taabtay xayndaabka iyo xulashada kala-furashada, inkastoo aan doorbiday inaan sameeyo shabakad hore, jarjar oo tirtir qeybta soo hartay. Kadibna shey waa in loo qoondeeyaa waxa ay yihiin, haddii ay yihiin wadooyin waawayn, xiriiriyaha wadada weyn ee buundada oo tilmaamaya inay leeyihiin hal ama laba tilmaam.
Waxaan sidoo kale loo isticmaalaa in lagu edit qaar ka mid ah khadadka u dhow in ay ahaayeen oversimplified iyo ku daray labo ka mid ah qaybaha in inkasta oo aan la arkin in image ee Google, waanan garanayaa iyaga, waayo, subax kasta aan ku dhex halkan ku socdaan markii aan si aan shaqo tagaan.
Ugu dambeyntii, ka dib markaad ciyaareyso, shaqadii vector ayaa aniga ila joogtay.
Marka aad gudbinayso xogta, nidaamku wuxuu ansixiyaa is-khilaafaadka, sida noodhka aan ku xirnayn, iyada oo xulashada lagu soo rogi karo aagga colaadda. Waxay ku dhacdaa waxoogaa yar sababtoo ah dabacsanaantu waa mid waxtar leh oo waxtar leh. Waxa kale oo ay ansixisaa mawduucyada sare ee noocyada isku midka ah iyo xidhiidhada qariibka ah ee u dhexeeya jihooyinka raadinta. Qodobo kale oo la ansixiyey waa iskahorimaadyo xogo kale oo laga yaabo in qof laga yaabo inuu ka soo galo isla degaanka.
Marka la soo dejiyo, waxaad arki kartaa isbedelka isla markiiba OSM.
Waxaan ugu yeernaa baska wada shaqeynta.
Waxaan soo jeedinayaa inaan fiiriyo a Soo bandhigid in Jorge Sanz uu sameeyay, tirakoobka, xogta iyo guulaha OpenStreetMap oo naga caawinaysa in aan fahanno inta badan ee aan ku qabanno maskaxdeenna u muujineyno qaab-dhismeedka dad-weynaha.
Isbarbardhig OpenStreetMap oo leh khariidado kale oo internetka ah
Post Previous«Previous Muuqaalka topografi dhaqameedka vrs. LiDAR Sax ahaanta, waqtiga iyo kharashyada.
Post Next Macluumaadka laga keeno OpenStreetMap ilaa QGISNext »